သောသီခို: ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချူပ် ဂွန်တာဂန်ရှောင် သက်သေခံချက် (ဘာသာရေးရှုထောင့်)
ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချူပ် ဂွန်တာဂန်ရှောင် သက်သေခံချက် (ဘာသာရေးရှုထောင့်)
မှတ်ချက်။ ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ တခြားကရင်ညီကိုတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါမှတ်ချက်သည် ကရင်ခရစ်ယာန်တချိူ့ အတွက်ကိုသာရည်ရွယ်ပါသည်။
ကရင်ခရစ်ယန်ဘာသာရေးဆရာတချိူ့ ကဟောပြောလေ့ရှိပါတယ် မင်းဆိုးမင်းညစ်(အာဏာရှင်)ဆိုဒါတွေဟာ ဘုရားသခင်ကအခွင့်ပေးထားလို့ တဲ့..ဒါကြောင့် ကျတော်တို့ လက်ခံရမယ်ဆိုပြီး ဟောပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းချက်က ရန်သူအကြိုက် လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေဟာ ဘုရားသခင်ကခွင့်ပေးထားတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ ကရင်ခရစ်ယာန်ညီကိုတွေကို ဒီနေရာမှာ ကချင်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ယုံကြည်ချက် နှင့် နိုင်ငံရေးဒသနများပါဝင်တဲ့ ဒီဗီယိုဖိုင်လေးကို မှီးစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Posted by ဇင်ယော် at 3:52 AM
The KNU should learn the lesson from Kachin experience about peace. I don't believe the Burmese government will fulfill your what you ask. Instead, they will try to take advantage from you.
Mu Tu Say Po was asked to open Pa-an office to make Thein Sein's trip to US smoothly.
Moreover, Aung Min always talk only business not very serious about peace.
We, the Karen would like to see our strong leaders to defeat the enemy, not to be the element used by the enemy.
saw moowah said...
Hsaw you are right
Don't talk more about those leader.
The more you talk the more karen people will disappointed with our karen leader.
Lot of Karen people and educated people leaving because of those leadership.
ကဲ ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်ရဲ့ ငြိမ်းကိုစားလှယ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကလိန်ကကြစ်လိမ်လယ်လှည့်ဖြားမှုတွေကို ဒီ Interview ကနေတရားဝင်ဖေါ်ပြလိုက်ပါပြီ။ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကကြတော့ ဒီနေ့အထိ Interview တွေမှာရော မီဒီယာကတဆင့်ရော ကောင်းတာတွေပဲပြောနေကြပါလား။ဒါဆို စဉ်းစားစရာက ၂ချက်ရှိနေပြီ (၁) မကောင်းမှန်းတော့သိတယ်တဖြည်းဖြည်းတထစ်ခြင်းကောင်းအောင်လုပ်ယူသွားမှာမို့ လတ်တလောအခြေအနေများထိန်ချန်နေခြင်းလား (၂)မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်နေလို့လား(သို့) အများအတွက်မကောင်းသော်လည်း သူ့အတွက်ပုဂလိကအကျိုးအတွက်ကောင်းလို့လုပ်နေတာလားဆိုတာ သေ ခြာစဉ်းစားကြဖို့လိုအပ်ပြီ။ လက်ရှိအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေဟာ ရှမ်းကိုတမျိုး။ကရင်ကိုတဖုံ။ ကချင်ကိုတလမ်း။မွန်ကိုတစခမ်း စသည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင် အဖွဲ့ (၁၁)ဖွဲ့ကို ပုံစံတမျိုးစီဖြင့် အပြော့အမာ အထူအပါးပေါ်လိုက်ပြီး လှည့်စားခွဲခြားကိုင်တွယ်နေတာဟာ တပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့လား Divide & Rules ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးကို Modify လုပ်ထားတဲ့စကားလုံးပြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးလား Seperate & Disperse တစစီခွဲထုတ် အပြတ်ဖြုတ် လုပ်နေတာလားဆိုတာ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် စံနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာစေခြင်ပါသည်။ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုယင်တပြေးညီ မူတရပ်တော့ရှိရမှာပေါ့ အခုဟာက အပြစ်အတင်းရပ်ပြီး ဒေသတွင်းစီးပွါးရေးတွေကိုပဲ အတင်းဖိပြီးလုပ်ဖို့စီးပွါးရေးအသွင်ဖေါ်ဆောင်ပြောင်းလဲဖို့ပဲ တွန်းအားပေးလုပ်ခိုင်းနေတာ။ ဒေသတွင်းလူထုဘ၀တွေအားလုံးတိုးတက်လုံခြုံမှုနဲ့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလစ်လျှုပြု ရှင်းရှင်းပြောယင် ဒေသတွင်းသယံဇာတစီမံက်ိန်းများကို ဒေသတွင်းရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပြီး အစိုးရအတွက်လဲစီးပွါးရေးအရအကိ်ျုးအမြတ်ရ လက်နှက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလဲခြောင်လယ်စေမဲ့စီးပွါးရေးအခွင့်အ လန်းတွေဖန်တီးပေး ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စီးပွါးဥစ္စတွေနဲ့ ဘ၀လုံခြုံမှုတွေကိုတော့ ဘေးချိတ်ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်တဲ့အတွက် (၁၇)နှစ်အပြစ်ရပ်ခဲ့တာတောင်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ် စားပွဲဝိုင်းပေါ်ကသိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှူမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးဆိုယင် ကရင်နဲ့ အပြစ်ရပ်တွေဟာခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့ အတော်စဉ်းစားရခက်နေပါပြီခေါင်းဆောင်ကြီးများတိူ့